ဖြစ်ရပ်မှန်တင်ပြ - Shijiazhuang Yiling ဆေးရုံ
မစ္စတာ Xiao 67 နှစ်ရှိပြီ, မူလတန်းအသည်းကင်ဆာ, AFP1000u / ml, ဝမ်းဗိုက်မှန် CT: focal ပုံစံတွေနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးအသည်းကင်ဆာ, စိမ်းညာဘက်ယုတ်ညံ့ vena cava အများနှင့်ပေါ်တယ်သွေးပြန်ကြောများနှင့်ကျူးကျော်တည်ရှိ subcapsular effusion, အသည်းခြောက်, ပေါ်တယ်သွေးပြန်ကြောကိုထပ်တိုးနှင့်အတူအသည်းဆေးတောင့် , cholecystitis, ထိုသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောပတ်ပတ်လည်ရေနုတ်မြောင်း, တဦးတည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းသရက်ရွက်။ Interventional embolization + တရုတ်ဆေးပညာနှင့်အခြားဘက်ပေါင်းစုံကုသပေးခဲ့သည်။ သိသာဖြစ်ပေါ်လာအောင်။
ဝါသနာရှင် Yusuo, အထီး, 57 ညာဘက်အဆုတ်ကင်ဆာ, squamous cell carcinoma ၏ရောဂါဗေဒ, အကျိတ်ဟာအဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောထိပါးနှင့်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်, radiotherapy လည်း contraindicated သောအခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
သူ့ကိုဘက်ပေါင်းစုံကုသမှုများကိုပေးစွမ်းကုသမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတို့ပါဝင်သည်: ဆေးပညာ + Interventional + hyperthermia ။
အခုတော့ထိရောက်မှုအကဲဖြတ် CR (အပြည့်အဝလွှတ်), ယခုတိုင်အောင်ကျော်ကို3နှစ်ဆက်လက်ရှင်သန်, ပုံမှန်အားဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။
Guillain-Barre syndrome ရောဂါ
ဝမ် Moumou, 54 နှစ်ရှိပြီအထီး, Shijiazhuang ။ သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအစှနျးမှာထုံနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုတနှစ်အဘို့အားနည်းခြင်း၏ဇူလိုင်လ 2010 ခုနှစ်ကဆေးရုံခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ, 2009 ခုနှစ်, လူနာသူမ၏တိုင်ကြားစာများတွင်လေအေးပေးစက်မှုတ်အပြီးတွင်သူမ၏ခြေချောင်းများထုံ၏ညည်းညူနှင့်မကြာမီတန်ဖိုးထားမခံခဲ့ရရာနှစ်ဦးစလုံးလက်ချောင်းအတွက်ထုံရှိ၏။ စက်တင်ဘာလစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်အပေါ်တောင်ဘက်, အဖျား, ပဋိဇီဝဆေးကုသမှုအဖျားလက်ခြေမထုံရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ Proximity ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းပြန်ရှိ၏နှင့်မျှမဦးခေါင်းခွံနဲ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအရိုးစစ်ဆေးပြည်နယ်ဆေးရုံကို, လမ်းလျှောက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, အားနည်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွား ချွင်းချက်, ငြိမ်းချမ်းရေးဆေးရုံရန် lumbar ကျောရိုးစစ်ဆေး "lumbar 2-3 intraspinal neurofibroma" ပြပြီး, myoelectricity ပြသခဲ့သည် "ဟုအဆိုပါ distal ကြွက်သားအတွက် distal အာရုံကြောမူမမှန်။ " နိုဝင်ဘာလမှာတော့သူကအာရုံကြောအိမ်မှအကျိတ်ဆိုင်ရာပါရဂူကျမ်းပြုစုဖျော်ဖြေဖို့ Tiantan ဆေးရုံကြီးသို့သွားကြ၏။
Postoperative ကိုယ်အလေးချိန်ပြည်နယ်ဆေးရုံကိုမတည်ငြိမ်မှု, သာမန်ဆီးသတိလစ်မေ့မြောရောဂါနှင့်ချောင်းဆိုးခြင်းတို့အကြားရေရှိ၏, အသေးစားအလျားလိုက် nystagmus နှင့်အတူမှန်ဘီလူးရူပါရုံကိုဖေဖော်ဝါရီ 2010 လမ်းလျှောက်, 20 jins, တဖြည်းဖြည်းတိုးလာစှနျးအတွက်ထုံကြီး myoelectricity Check "symmetry ပြသ , distal မော်တာ axon, myelin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်, လုံးဝပျက်စီးအာရုံခံအာရုံကြော "အဖြစ်ရောဂါလက်ဝဲ sural အာရုံကြောခန္၏," နာတာရှည် neuropathy "နှစ်နိုင်ငံပုံမှန် evoked အလားအလာ, ပုံမှန်မဟုတ်သော brainstem-အာရုံအလားအလာ, စင်ကြယ်သောသေံ audiometry binaural အာရုံကြောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချောင်းဆိုးပြသထားတယ်, ရောဂါဗေဒ evoked" အစိမ်းရောင်-Ballie syndrome ရောဂါ "ကိုယ်အလေးချိန်ကနေ recover, ခြေလက်အင်္ဂါအတွက်ထုံလျှော့ချဖို့, ချွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများဖယ်ရှားခြင်း, စောင်ရေကုသမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ဟော်မုန်းနှင့်ကြှေးမှေးအာရုံကြောလျှော့ချဖို့, ကြီးမား-ထိုး gamma မီးသီး Give နှင့်အိမ်ပြင်လမ်းလျှောက်။ ရိနာစွဲပြီးနောက်အခြေအနေကိုအတော်လေးတည်ငြိမ်ခဲ့စှနျးစှနျးမှာထုံ၏ရောဂါလက္ခဏာများနေဆဲသိသာခဲ့ကြသည်, အားနည်းခြင်းဒူးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုလမ်းလျှောက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အပိတ်သို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်လမ်းလျှောက်ပါကမျက်စိအတူတက်ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျွန်မကုသမှုဘို့ငါတို့ဆေးရုံသို့ရောက်ကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးရုံများတွင်4ပတ်က '' ကုသမှုပြီးနောက်: လက်နှင့်ခြေအဆုံးမှာထုံ၏ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်နှင့်ခြေများ၏ flexion 4th တန်းဖြစ်ပါသည်, နှင့်လမ်းလျှောက်တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။ Follow-up,: ယခုအချိန်အထိအဘယ်သူမျှမပြန်ဖြစ်, သာမန်ဘဝနှင့်အလုပ်။ သောကြောင့်ကန့်သတ်နေရာ, ငါတို့ကုထုံးပိုပြီးမပြနိုင်ပါ။ သင်တိကျသောကုသမှုသိလိုလျှင်သင်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားပြော, ရိုးရှင်းသောတရုတ်ဆေးဝါးအဖြစ်ရှည်လျားသောတရုတ်ဆေးပညာဆိုင်ရှိသည်အတိုင်း, နိုင်ငံတိုင်းတွင်တွေ့မြင်ရသည်။ သို့သော်စနစ်တကျတရုတ်ဆေးပညာကုသမှုပြည်ပမှာမရရှိနိုင်။ သူတို့သည်သင်၏တိကျတဲ့နာမကျန်းအခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်. လုပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကအသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့အခွအေနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်ကျနော်တို့က, ဆက်သွယ်ရေးစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကိုမေးပါလိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်ထိုဖြစ်ပါတယ်။
5. ပျက်စီးကျောက်ကပ်ဆဲလ်၏ Self-curative စွမ်းရည်တိုးမြှင့်
6. ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Qi, တဦးတည်းအရေးကြီးသောစွမ်းအင်, အာူး
7. ကျောက်ကပ် filtration မှုနှုန်းတိုးတက်စေူခင်း
2 ပတ်ကုသမှုမှာတော့အာဖရိကဆီးချိုရောဂါလူနာပစ္စည်းများကုသပေါင်းစည်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လူအားလုံးတို့သည်န်ထမ်းသူမကပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဖို့ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။
TCM ကုသမှုနည်းပညာ, TCM decoction, ငါးဒြပ်စင်ရေချိုး, လိုအပ်သောအနောက်တိုင်းဆေးပညာဆေး ....
ဒီတစ်ခါလည်းသင်ကဘယ်နေရာမှာမဆိုနှိပ်တွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်, အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်အတွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ရာ Tuina, အတွင်းပိုင်းစနစ်များ, မသာအရေပြားသို့မဟုတ်ကြွက်သားပေါ်မှာအနှိပ်လျက်ရှိ၏ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဟာသို့သော်ရှိသမျှသော acupoint သည်ထောင့်, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအတိမ်အနက်ကိုအလုပ်မလုပ်, နေရာတိုင်းအပ်စိုက်ကုထုံးတွေ့နိုင်ပါသည်; ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သို့သော်ကျနော်တို့လူနာသည်ကိုယ်တိုင်နဲ့အကူအညီနဲ့ဒါတိကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေပေါ်အခြေခံပြီးလမ်းပြငါးဒြပ်စင်သီအိုရီကိုသုံးနေရာတိုင်းဆေးရေချိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။